Imimmiselo yokusebenzisa - I-Ocean-Components.com
Esi sivumelwano sineenkcukacha zemibandela ye-www. I-Ocean-Components.com, ukuba unawo nawuphi na umbuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi!
Nceda ufunde eli xesha lokusebenzisa kunye nengxelo yabucala ngononophelo phambi kokuba ubhalise kwi-Ocean-Components.com .kubhaliso lwakho ngempumelelo, kwiimenyu ozifundileyo, wavuma kwaye wamkela yonke imigaqo kunye neemeko zokusebenza kunye nengxelo yabucala. Siya kupapasha ingxelo ehlaziyiweyo kwi-Ocean-Components.com, ukuba sitshintshe le ngxelo. wonke umxholo wesivumelwano uza kuqala ukusebenza ngomhla wokupapashwa kwawo. ukuba awuvumi olu hlaziyo, kuya kufuneka uphelise ubudlelwane kunye ne-Ocean-Components.com.
1, UBHALISO LWE-USER:
1), Isiqinisekiso soMsebenzisi:
Wonke umsebenzisi we-Ocean-Components.com kufuneka abe yinkampani okanye umntu onokuthi asayine isivumelwano sokuzibophelela somthetho phantsi komthetho. Nceda ungasebenzisi inkonzo yethu ukuba awulungelanga. Awungekhe ugqithise okanye uthengise i-akhawunti yakho ye-Ocean-Components.com. I-Ocean-Components.com inelungelo lokunqumamisa okanye icime i-akhawunti yakho ngokweminqweno yabo.
2) Ukubhala kwezixhobo:
Bonke abasebenzisi kufuneka babonelele ngolwazi oluyinyani, olusebenzayo lobuqu kwi-Ocean-Components.com, ukuze baqiniseke ngokushishina. Ukuba kukho naluphi na utshintsho, nceda wazise kwaye uhlaziye kwi-Ocean-Components.com kwangoko.
Bonke abasebenzisi be-Ocean-Components.com bayavuma ukwamkela ii-imeyile kunye nemiyalezo evela kubalingani be-Ocean-Components.com okanye beOcean-Components.com.
I-Ocean-Components.com inengxelo yabucala esetyenziswa kubo bonke abasebenzisi kubandakanya isivumelwano somsebenzisi. Kuya kufuneka ufunde kwaye wamkele isiteyitimenti sabucala ukusebenzisa iOcean-Components.com xa ubhalisa, kwaye uya kujongana nezithintelo ngomthetho (kunye ne-Ocean-Components.com nayiphi na ingxelo ehlaziyiweyo yengxelo yabucala) ngexesha labasebenzisi be-Ocean-Components.com.
1), Phambi kokuba uvume, malunga nalo lonke ulwazi lwedatha yomsebenzisi, igama lokwenyani, idilesi, idilesi ye-imeyile, ulwazi loqhagamshelwano..etc. I-Ocean-Components.com ayisayi kusetyenziselwa ezinye iinjongo.
2) Sebenzisa ulwazi olungelolwakho. I-Ocean-Components.com iya kuqokelela ulwazi olungelulo lomntu kwidilesi ye-IP, kubandakanya iipropathi zesiphequluli, uhlobo lwenkqubo yokusebenza, igama lesizinda se-ISP elinikezela iinkonzo zokufikelela, njl. I-Ocean-Components.com ikwenza ukuba kube nokuhamba izibalo zabasebenzisi kunye nokuphucula ulawulo kunye nenkonzo ngokuqokelela olu lwazi lungentla.
3), Ukhuseleko lwedatha yangasese. I-Ocean-Components.com iya kukhusela ulwazi lwakho lwedata ngesixhobo esikhuselekileyo sokusebenzisa izixhobo.
4), Ukutyhilwa kwedatha yomuntu kunye nokuthintelwa. I-Ocean-Components.com iya kubonelela ngolwazi lweenkcukacha zobuqu ngokwesicelo sesebe lezomthetho okanye ngombono wokhuseleko loluntu, xa urhulumente ebuza i-Ocean-Components.com ukuba ichaze ulwazi lwedatha yobuqu ngokuhambelana neenkqubo ezisemthethweni. I-Ocean-Components.com ayithwali uxanduva phantsi kwezo meko. Xa udibana nale mibandela ilandelayo, i-Ocean-Components.com iza kusebenzisa ulwazi lomntu ngamnye ngaphaya koluhlu oluyimfuneko: Sele siyifumene imvume yakho, imithetho ehambelanayo kunye neenkqubo sicela iOcean-Components.com inike abasebenzisi idatha yolwazi.
Bonke abasebenzisi xa bethenga kufuneka bathobele le migqaliselo ilandelayo:
1), Abasebenzisi kufuneka bahambisane nayo yonke imithetho esebenzayo, imigaqo, imigaqo kunye nemithetho yengingqi yokucela xa usebenzisa inkonzo ye-Ocean-Components.com kunye nokuthenga. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyigcina le migaqo yokusetyenziswa kunye nengxelo yabucala kubandakanya nayo yonke imigaqo kunye nemigaqo yamaxwebhu angasentla.
2), Unyanzelekile ukuba ugqibezele ukuthengiselana nge-Ocean-Components.com xa uyokuthenga, ngaphandle kweshishini eliqingqiweyo ngokwemigaqo yokusebenzisa kunye nemithetho. Nje ukuba ubeke iiodolo, uyaku kwamkela imigaqo nemiqathango echaziweyo, okoko iimeko zeshishini zisemthethweni kwaye ziphantsi kwesi sivumelwano.
3), Intengiso, uluhlu lwamaxabiso kunye neenkcazo kwi-Ocean-Components.com ayisiyo umnikelo. Sinelungelo lokukhumbula ulwazi oluvela-kwicala elinye, xa i-Ocean-Components.com ifumanisa ukuba iinombolo zenxalenye kunye neps zichanekile okanye zingaphandle. I-Ocean-Components.com inelungelo lokuthenga isithintelo se-qty. Xa ubeka iodolo, ukwamkelwa ukuba ukwiminyaka esemthethweni yokuthenga ezi mpahla, kwaye unoxanduva lokunyaniseka kuyo yonke ingcaciso oyinikezile nge-odolo.
4), Ixabiso leMveliso kunye nokufumaneka kuya kuchazwa kwindawo. Olu hlobo lolwazi luya kuhlaziywa naliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Intlawulo yokuhambisa iya kulungiswa ngokwahlukeneyo ngeendlela zokuhambisa ozithandayo. Ukuba naziphi na iingozi, umzekelo, umboneleli unyuse ixabiso, utshintsho kwiVAT, okanye inkqubo ye-Ocean-Components.com, zonke izizathu ezibangela ukuba iphinde ihlaziye ixabiso emva kokuqinisekiswa komyalelo, i-Ocean-Components.com iya kuthumela imeyile okanye umnxeba ukwazisa olu lwazi, unokuthatha isigqibo sokurhoxisa iodolo okanye hayi.
4, UMGANGATHO WENKONZO NANGEMVA KOKUthengisa
1), Jonga kwinkonzo emva kwentengiso.
2), Imveliso esemgangathweni.
Iimveliso ze-Ocean-Components.com ziya kuthobela ngqo urhulumente kunye nemilinganiselo yobungcali. Ukuba ngaphandle kwemigangatho yangaphambili, siya kusebenza ngokwemigangatho yomenzi, ukuba ngaphandle kwayo yonke le migangatho ingentla, abathengi banokuxoxa kwaye bathathe isigqibo phakathi kwe-Ocean-Components.com. Nayiphi na ingxaki esemgangathweni okanye ngaphandle kwemigangatho yeemveliso, abasebenzisi banokucela ukubuyela okanye batshintshe.
5, WEBSITE YOKHUSELEKILE:
Uyakwamkela ukuba awunakungena kwiwebhusayithi ngalo naluphi na uhlobo lwerobhothi, Isigcawu okanye isoftware yokuvuselela nayiphi na injongo ngaphandle kwemvume ye-Ocean-Components.com kwifom ebhaliweyo.
Ukongeza, uyavuma ukuba awuyi:
1), nayiphi na indlela yokucinga engenangqondo neyahlulekileyo enokulayisha ngaphezulu iwebhusayithi ye-Ocean-Components.com kunye (Ngokuchongwa kweOcean-Components.com).
2), Ngaphandle kwemvume yokubhala ye-Ocean-Components.com, utshintshe, ukope, ugqithise, usenza imisebenzi efunyenwe, usasaze okanye ubukele kwiWebhusayithi (ngaphandle kolwazi lwakho lwangasese).
I-3), Ngenelela okanye uzame ukuphazamisa ukusebenza kwewebhusayithi eqhelekileyo okanye nayiphi na into enokuyenza kwiwebhu.
4), Sebenzisa nawuphi na umxholo obethintelwe ngumthetho kunye nemithetho enxulumene noko.
I-5), Sebenzisa nayiphi na intsholongwane, ihashe leTrojan, intsholongwane ye-worm, ixesha lesiphelo, ukucima i-bots, iqanda le-Ista, i-spyware okanye enye inkqubo yenkqubo yekhompyuter enokuthi yonakalise, ihlaziye, icime, isiphumo esibi, ukuthintela okufihlakeleyo, isivumelwano okanye ukuthatha indawo nayiphi na inkqubo, idatha okanye ulwazi lomntu
I-6, INKCAZO YAMALUNGISELELO OLUNGISELELWEYO:
Ilungelo lokushicilela, ilungelo lobunini, uphawu, uphawu lwentengiso, imfihlo yokuthengisa kunye nawo nawaphi na amalungelo anikezwe yiOcean-Components.com onke angabakwa-Ocean-Components.com. Ngaphandle kwemvume ye-Ocean-Components.com, nabani na okanye ilungu alinakho ukukhuphela, ikopi, ukudlulisela, ukuhlaziya, kunye nokuhlela. Kungenjalo uya kuthwala uxanduva lonke olusemthethweni. I-Ocean-Components.com inelungelo lokukhumbula iseva yedatha ye-Ocean-Components.com xa umsebenzisi esebenzisa inkonzo.
I-Ocean-Components.com inoxanduva lokubonelela ngenkxaso yezobuchwepheshe qinisekisa ukuba iwebhusayithi isebenza ngokulandelelana, Zama ukunqanda ukuphazamiseka kwenkonzo, okanye ixesha le-Interrupt ngexesha elifutshane kakhulu, qiniseka ukuba umsebenzisi unokujongana kakuhle kwi-intanethi. Kodwa ngenxa yokunyanzelwa kwamandla okanye ezinye izizathu zingakwazi ukulawula, yenza iwebhusayithi iphazamiseke okanye ingakwazi ukusebenzisa, isiphumo sokurekhoda, umyalezo okanye ulwazi olulahlekileyo, i-Ocean-Components.com kukungakhathali: kwaye nawuphi na umsebenzisi unika ulwazi oluphosakeleyo okanye olungafezekiswanga nolububuxoki Ayikwazi ukusebenzisa inkonzo ye-Ocean-Components.com okanye isebenze enye ilahleko, iOcean-Components.com kukungakhathali.
Esi sivumelwano kuzo zonke iindlela zilawulwa yimithetho yeHong Kong. Le webhusayithi bonke abasebenzisi bayirhuqa i-Ocean-Components.com engabanjwanga ilawulwa ngumda wenkundla kunye nenkundla ephezulu. Izibonelelo zesi sivumelwano ziyahlula-hlula, Ukuba naliphi na ilungiselelo lesi sivumelwano ligwetywa njengongasebenziyo okanye linganyanzeliseki, ukubonelelwa kuya kucinywa kwaye amalungiselelo ashiyekileyo aya kwenziwa.